Umhlahlandlela Ophelele Ngomthetho Wokulamula e-UAE | Umthetho Wokulamula we-UAE
Umhlahlandlela Ophelele Ngomthetho Wokulamula e-UAE
Umthetho Wokulamula we-UAE
Ukukhula okuzenzakalelayo komnotho kwe-UAE kuyisungule njengesikhungo esihamba phambili sezezimali. Ngaleyo ndlela, izwe selidonse amehlo kubatshalizimali bamazwe omhlaba nosonkontileka. Ngokwemvelo, lokhu kuholele ekwakhiweni kwezikhungo ezahlukahlukene zamabhizinisi.
Futhi ngokwanda kwezinkampani zezohwebo, i-UAE ibone ukuphakama kwezingxabano zezohwebo. Lezi zingxabano ziphinde zaphindaphindeka ngenxa yokwehla komnotho emhlabeni. Lokhu kwehla kwenze izinkampani zingakwazi ukukhiqiza imali lapho zidingeka ukufeza izivumelwano zazo nabantu noma ezinye izinkampani.
Ngokuqubuka kwezingxabano, kwavela isidingo sohlelo lokuxazulula izingxabano olufika ngesikhathi nolonga imali. Ngakho-ke ukuchithelwa kwabaningi ekulamuleni.
Ngakho-ke sekuwumkhuba ojwayelekile wamabhizinisi ezentengiselwano e-UAE ukufaka izigaba zokulamula noma izivumelwano kwizivumelwano zabo.
Ake sihlole ukuthi kuyini ukulamula ngaphambi kokungena emthethweni we-arbitration law e-UAE kanye nezinzuzo.
Arbitration ingenye yezinhlelo ezinkulu zokuxazulula izingxabano. Ezinye izindlela zokuxazulula izingxabano zifaka ukuxoxisana, ukulamula, umthetho wokubambisana, kanye nokubanga amacala.
Phakathi kwalezi zindlela ezahlukahlukene zokuxazulula izingxabano, ukulamula kuyabonakala. Lokhu kungenxa yezici zayo ezinamandla.
Enye yezinto eziyinhloko zokulamula ukuthi izinhlangano zamabhizinisi noma abantu ngabanye bangalungisa ukungaboni ngaso linye kwabo ngaphandle kokuya enkantolo.
Le nqubo ifaka phakathi amaqembu amabili akhetha umuntu wesithathu ongakhethi, obizwa ngokusemthethweni ngokuthi umlamuli, ukuze ame phakathi noma nini lapho kuvela izingxabano. La maqembu womabili avumelana kusenesikhathi ukuthi isinqumo somlamuli asisoze saphela futhi siyabopha. Lesi sinqumo sibizwa ngokusemthethweni njengomklomelo.
Ngemuva kokuthi amaqembu amabili aphikisanayo evumelene ngemininingwane yenqubo yokulamula, ukulalelwa kuyaqhubeka. Kulokhu kulalelwa, zombili izinhlangothi zethula ubufakazi nobufakazi bazo obufakazela lokho ezikushoyo.
Ngemuva kwalokho, umlamuli ubheka okushiwo yizinhlangothi zombili ukwenza umklomelo. Lo mklomelo uvame ukuba ngowokugcina, futhi nezinkantolo aziwuhlolisisi umklomelo.
Ukubambisana kungaba ngokuzithandela noma okuphoqelekile.
Ngokomhlangano, ukulamula bekuhlala kungokuzithandela. Kepha ngokuhamba kwesikhathi, amanye amazwe akwenze kwaphoqeleka uma kuziwa ekuxazululeni izingqinamba ezithile zomthetho.
Sibutsetelo se-UAE Arbitration Law
Umthetho wokulamula we-UAE unezici ezahlukahlukene, ezibandakanya:
# 1. Uhlaka lomthetho
Umthetho we-arbitration law ungasebenza ezindaweni ezahlukahlukene ze-UAE ngaphandle kwezindawo zamahhala zezimali. Lezi zindawo zamahhala ezezimali zaziwa nangokuthi izindawo zokuhweba zamahhala.
Yizifunda zezomnotho lapho abatshalizimali bakwamanye amazwe besungula amabhizinisi abo futhi baqhuba ukuhweba. Indawo ngayinye yamahhala inemithetho yayo ekhethekile yokulamula ehlose ukukhuthaza nokuheha abatshalizimali bangaphandle.
Kunezindawo ezimbili zokuhweba zamahhala e-UAE:
Imakethe Yomhlaba Wonke Beka Abu Dhabi
I-Dubai International Financial Center
Ngaphandle kwalezi zones, umthetho wokulamula jikelele usebenza kunoma yisiphi esinye isifunda e-UAE.
# 2. Ukulinganiselwa
Ngokwe-UAE Federal Law, amaqembu angaphonsela inselelo umklomelo wokulamula kungakapheli iminyaka eyi-15 uma kuyisimangalo somphakathi futhi kungakapheli iminyaka eyishumi uma kuyisimangalo sokuhweba. Lapho kuphela isikhathi esibekiwe, noma yiziphi izinyathelo zomthetho ezihlobene nomklomelo wokulamula zivinjelwe isikhathi futhi ngeke zinakekelwe yinkantolo.
Ngokwengeziwe, umthetho uhlinzekela ukuthi umklomelo wokugcina kufanele ukhishwe kungakapheli izinyanga eziyi-6, kusuka ngosuku lokulalelwa kokuqala.
Umlamuli anganweba ukulalelwa ngezinye izinyanga eziyisithupha noma ngaphezulu ngokuya ngamaqembu aphikisanayo.
# 3. Ukusebenza kwesivumelwano sokulamula
Ukuze noma yisiphi isivumelwano sokulamula sisebenze, kufanele sihlangabezane nezimfuneko ezithile, ezibandakanya:
Ukulamula kufanele kube ngefomethi ebhaliwe. Lokhu kungabandakanya ukushintshaniswa kwemiyalezo ebhaliwe noma ebhaliwe.
Umuntu osayina inkontileka yesivumelwano egameni lesikhungo kufanele abe negunya lokuthatha isenzo esinjalo.
Uma umuntu wemvelo esayina isivumelwano, lowo muntu kufanele abe ngumuntu okwazi ukwenza izibopho zakhe zomthetho.
Inkampani ingasebenzisa inkontileka yokulamula yenye inqobo nje uma izokhomba isigatshana sokulamula esifakiwe.
Ngaphezu kwalokho, izitatimende ezisenkontilekeni yokulamula kufanele zibe semibhalweni ecacile. Womabili amaqembu kufanele futhi akuqonde kahle konke okusenkontileka yokulamula.
# 4. Umlamuli
Ngokomthetho, akunamkhawulo enanini labalamuli abangaba secaleni. Kodwa-ke, uma kunesidingo somlamuli ongaphezu koyedwa, khona-ke inani labaxazululi kufanele libe yinombolo eyinqaba.
Lapho ukhetha umlamuli, kuneziqondiso ezithile zomthetho:
Umlamuli kufanele, ngazo zonke izindlela, abe yiqembu elingathathi hlangothi elingeyona into encane ngokomthetho.
Umlamuli akufanele abe ngaphansi kokuvinjelwa ngenxa yokuqothuka, ubugebengu, noma ezinye izinto ezingekho emthethweni.
Umlamuli akumele asebenzele noma yiliphi kula maqembu amabili asayina isivumelwano sokulamula.
# 5. Ukuqokwa komlamuli
Amaqembu womabili aphethe ukuphakamisa abaxazululi. Kepha lapho la maqembu womabili engakwazi ukufinyelela esivumelwaneni, isikhungo sokulamula singangenelela ukuqoka abaxazululi abaqeqeshiwe.
Ngemuva kwalokho, abaxazululi baqoka usihlalo phakathi kwabo. Uma bengakwazi ukuqoka usihlalo, isikhungo se-arbitral sizokwenza ukuqokwa.
# 6. Ukuzimela nokungakhethi komlamuli
Uma kuqokwa umlamuli, umlamuli kufanele anikeze isitatimende esibhaliwe esisusa konke ukungabaza ngokungakhethi kwabo. Uma kunecala lapho umlamuli engakwazi ukuqhubeka nokungakhethi ecaleni lokulamula, kufanele bazise amaqembu. Futhi lokhu kungadinga ukuthi umlamuli ashiye isikhundla sabo.
# 7. Ukususwa komlamuli
Izinto ezithile zingaholela ekususweni nasekushintsheni kwabaxazululi, kufaka phakathi:
Ukufa noma ukwehluleka komlamuli ukwenza imisebenzi yabo.
Ukwenqaba ukwenza imisebenzi yabo.
Ukwenza ngendlela eholela ekubambezelekeni okungenakulungiswa enkambisweni.
Ukwenza izenzo ezephula isivumelwano sokulamula.
Izinzuzo Zokukhetha Ukulamula Kwezentengiselwano
# 1. Inkululeko yokukhetha umuntu ofanele ukuxazulula impikiswano
Womabili la maqembu akhululekile ukukhetha umlamuli abakholelwa ukuthi uwulungele lowo msebenzi. Lokhu kuvumela izinhlangothi zombili ukuthi zikhethe umlamuli onolwazi oluhle lodaba olusondele.
Banethuba lokukhetha umuntu onolwazi olwanele ekuxazululeni izingxabano phakathi kwamabhizinisi.
# 2. Ukuvumelana nezimo
Ukulamula kwezentengiselwano kuyaguquguquka ngoba kunikeza amaqembu amandla okuyalela ukuthi inqubo ihamba kanjani, kufaka phakathi isikhathi nendawo. Lokhu kuvumela izinhlangothi zombili ukuthi zenze uhlelo lwesivumelwano ezikhululekile ngalo.
# 3. Isikhathi esifanele futhi esonga imali
Ngenxa yokuguquguquka kwesixazululo sokuhweba, amaqembu angenza inqubo isheshe.
Lokhu kusiza ekongeni imali eyeqile esetshenzisiwe ngesikhathi samacala.
# 4. Isinqumo sokugcina
Isinqumo sokugcina esenziwe ekulameni siyabopha. Lokhu kwenza kube yinselele kunoma yiliphi iqembu ukufaka isicelo sokubuyekeza lapho lingenelisekile ngomphumela. Lokhu kwehlukile emacaleni asenkantolo adala amathuba ezicelo ezingapheli.
# 5. Inqubo engathathi hlangothi
Endabeni yezingxabano zebhizinisi lamazwe omhlaba, izinhlangothi zombili zinganquma ukuthi ukulalelwa kuzokwenzeka kuphi. Bangakhetha futhi nolimi ngenqubo yokulamula.
Qasha ummeli onolwazi wokulamula i-UAE
U-Amal Khamis Ummeli nabonisi bezomthetho yinkampani yezomthetho ye-UAE esungulwe kahle eyaziwa emhlabeni wonke. Siyinkampani yomthetho ehola phambili yokulamula izindaba e-UAE. Ithimba lethu labameli lingakusiza ekubhaleni isivumelwano sokulamula kwezohwebo futhi likuqondise ekuqhubekeni kokulamula kuqhubeka e-UAE.
Sinesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengama-50 ekubhekaneni nezinkinga ezahlukahlukene zezomthetho, ikakhulukazi endaweni yokulamula ngokokuhweba. Siyinkampani yezomthetho egxile kumakhasimende esebenza kakhulu namakhasimende ethu ukuhlangabezana nezidingo zawo ezithile. Ngakho-ke izintshisekelo zakho zizovikeleka kahle nathi njengommeleli wakho.
Ukulamula sekuyindlela ethandwa kakhulu yokuxazulula izingxabano, ikakhulukazi ezingxabanweni zezentengiselwano lapho kungaba nemali eningi engcupheni. Kodwa-ke, abantu abaningi bazi okuncane ngomthetho, futhi abakwaziyo kaningi akulungile. Sinakho konke okudingekayo ukuphatha nokuxazulula izingxabano zokuhweba, noma ngabe iqembu liyibhizinisi elincane noma elikhulu. Finyelela kithi namuhla futhi masenze umsebenzi omuhle kakhulu wokuxazulula leyo mpikiswano ngokuthula.